China Bio-monina 1, 4-butanediol (BDO) fanamboarana sy ozinina | Landian
1,4- butanediol (BDO) miorina amin'ny bio
Drafitra molekular: C4H10O2
Molekular lanjany: 90,12
toetra mampiavaka:Tsy misy loko sy ranoka misy menaka manitra izy io. Ny teboka fanamafisam-peo dia 20.1 C, ny teboka miempo dia 20.2 C, ny teboka mangotraka dia 228 C, ny hakitroka somary 1.0171 (20/4 C), ary ny index bias dia 1.4461. Teboka tifitra (kaopy) amin'ny 121 C. Soluble amin'ny methanol, étanol, acétone, mora levona amin'ny ether. Izy io dia hygroscopic ary tsy misy fofona, raha somary mamy kosa ny fidirana.
Tombony: 1,4-butanediol miorina amin'ny bio dia vita avy amin'ny asidra succine miorina amin'ny bio amin'ny alàlan'ny esterification, hydrogenation, fanadiovana ary ireo dingana hafa ary ny atin'ny bio-carbon dia mihoatra ny 80%. Ny plastika biodegradable toa ny PBAT, PBS, PBSA ary PBST mampiasa 1,4- butanediol ho akora dia plastika biodegradable tokoa, izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny biomassa amin'ny firenena maro.
1,4- butanediol (BDO) dia akora simika organika sy simika tsara. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fitsaboana, indostrian'ny simika, lamba, fanaovana papermaking, fiara ary indostria simika isan'andro. Io no akora fototra ho an'ny famokarana plastika polybutylene terephthalate (PBT) sy ny fibres PBT. Izy io no akora ilaina amin'ny famokarana PBAT, PBS, PBSA, PBST sns.
Previous: asidra sucinika miorina amin'ny bio / amérika miorina amin'ny bio
Manaraka: Sitrana simika miorina amin'ny bio (WSA)